Man City oo kucaraabisa 1-0 Newcastle wararkalo xiise lah | Raadgoob
Man City oo kucaraabisa 1-0 Newcastle wararkalo xiise lah
Premier League 387
Manchester City ayaa dhibcaha ugu hooseysa horyaalka Premier League ku jirta ka dib barbaro 1-1 ah oo ay la galeen Everton
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa sheegay in ay adag tahay in la ciyaaro kooxaha ka ciyaara daafaca ka dib markii kooxdiisa ay 15 dhibcood oo nadiif ah ku hogaamineyso horyaalka Premier League.
Raheem Sterling ayaa dhaliyey goolka kaliya ee goolka guusha u dhaliyay kooxda martida u ah ee St James ‘Park taas oo 78% kubad heysata islamarkaana 21 darbo uu ka helay Newcastle lixdii kulan ee ugu danbeysay.
“Waxaan sameynay wax walba, lakiin waa adag tahay inaan ciyaaro marka koox kale aysan dooneynin inay ciyaaraan” ayuu yiri Guardiola.
“Daqiiqadii ugu danbeysay waxaan ku ciyaarnay qaab ciyaareedkooda, ka dibna ma aysan aheyn wax fudud sababtoo ah kama badin 1-0 – waxaan abuuray fursado ku filan inaan ku badino 2-0, 3-0, 4-0.
“Anigoo ah tababaraha waa inaan la qabsanaa kooxo waa weyn oo saxaafada ah, cadaadis hooseeya, na soo weeraray, tababare kasta iyo kooxduba way ciyaari karaan sida ay rabaan, waana inaad heshaa hab aad ku garaacdo”.
Ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee England Sterling ayaa goolka barbardhaca u dhaliyay Kevin de Bruyne ka dib markii Sergio Aguero uu labo jeer shabaqa ku hubsaday saacadihii furitaanka.
Rolando Aarons ayaa shabaqa ka soo toogtay Nicolas Otamendi oo ahaa rigoore loo dhigay Newcastle, laakiin City ayaa si fiican u ceshatay ka dib markii De Bruyne uu shabaqa ku hubsaday qeybtii labaad.
Kooxda martida loo yahay ayaa muujisay hami dheeraad ah, Christian Atsu wuxuu bedelay bedelkiisa Dwight Gayle si uu ugu daboolo shanta daqiiqo ee ugu dambeysa.
Jawaab ka yimid St James ‘Park oo ah hoggaamiyeyaasha hoggaamiya magaalada
City ma ahan in la diido markii 18aad oo isku xigta horyaalka, laakiin waxay sii dheereyneysaa rikoorka ugu sarreeya ee England.
Guuldaradii shanaad oo isku xigta oo ay la kulantay kooxda Magpies ayaa iyaga ka dhigeysa dhibco ka baxsan aagga jimicsiga.
Qeyb ka mid ah qeybta hore
Raheem Sterling ayaa u dabaaldagaya furaha Manchester City
Raheem Sterling ayaa dhaliyay 17 gool tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan
Jonjo Shelvey ayaa goolka guusha u dhaliyey daqiiqadii ugu horeysay ee ciyaarta, waxaana goolka guusha u dhaliyay Ederson. Laakiin 30 daqiiqo ee soo socota Newcastle ma aysan helin meel kale.
Hase yeeshee, kooxda martida loo ahaa ayaa si aad ah u fadhiistay waxaana ay si toos ah ula qabsadeen weeraryahan Joselu oo 15 yard u ciyaarayay qeybtii hore.
Magaalada, adoo kalsooni leh oo kalsooni leh oo si fiican loo adeegsado xeeladahan oo kale, ayaa meesha daboolka ka dhigtay iyo fursadaha loo abuuray iyada oo aan loo eegin.
Intii u dhaxeysay ganaaxa, Aguero ayaa si joogta ah uga soo qaatay goolhayaha Newcastle Rob Elliot.
Markii Vincent Kompany uu dhaawacmay, Pep Guardiola wuxuu dareemay kalsooni ku filan oo uu ku bedeli karo daafaca Gabriel Jesus.
Taageerayaasha guriga ayaa la yareeyay si ay ugu dhiiran yihiin in ay tuuraan tuur-yada sida ay kooxahooda hantidooda ku joogaan oo ay joogeen koonfurta 20%.
In la joojiyo waxay noqon laheyd mid ka mid ah ficilada weyn ee wax ka qabashada. De Bruyne wuxuu xaqiijiyay inuusan aheyn. Seddex daqiiqo markii ay socotay qeybtii labaad ee ciyaarta ayaa xiddiga reer Belgium waxa uu shabaqa ku hubsaday goolka seddexaad ee Premier League xilli ciyaareedkan.